[Video] can nwere ike ugbu a ịkpọ oku vidiyo site na Telegram | Gam akporosis
[Video] can nwere ike ugbu a ịkpọ oku vidiyo site na Telegram
telegram Ọ dịla ezigbo mkpa izi ozi ngwa maka oge ụfọdụ. A naghị ele ya anya dị ka ihe ọzọ, ọ karịrị ihe niile enyere nnukwu izobe data na ọtụtụ nhọrọ ọ wụnyegoro na ngwaọrụ anyị, na-ekwu okwu banyere asọmpi ya.
Ngwa Vidogram bụ ngwa mpụga iji nwee ike ịkpọ oku vidiyo, n’oge a ọ ga - ekwe omume ịme ya na otu onye na ndepụta kọntaktị gị. Vidogram, dị ka a na-akpọ ya, na-enye ọtụtụ nhọrọ maka ngwa ndị ọzọ dịnụ ma na-eme ka ọ dị ọtụtụ mgbe ị na-ahọrọ ya.
2 Hazie Vidogram nke ọma
3 Mezue ma hazie menu
4 Gị na ndị nọ gị nso kparịta ụka
5 Gbasaa ozi gị
Vidogram na-enye interface dị mfe na ilele anya mbụ, ma ọ zuru oke, na mgbakwunye na ịkpọ oku vidiyo anyị nwere ike iji ya dị ka ngwa iji kpọtụrụ ndị anyị, kpọọ oku na ọbụna ikiri telivishọn, n'etiti ndị ọzọ enwere ike. Ọ bụ ya mere o ji eme ya nhọrọ dị iche na ndị dị na Playlọ Ahịa Play.
Dị n'okpuru kọntaktị anyị nwere ọtụtụ nhọrọ, gụnyere oku vidiyo ikpeazụ emere, mepụta ọwa, otu dị iche iche, kọntaktị, ọkacha mmasị na nhọrọ ndị ọzọ. Vidogram na-agbakwunye ọtụtụ mgbakwunye na ya n'elu, na-achọ ndị mmadụ ma ọ bụ ederede, ịnweta usoro iheomume na ohere na ndepụta nke ọwa TV.
Mgbakwunye ọzọ nke interface bụ inwe ike iji Ọnọdụ Gbara Ọchịchịrị ya mere ama, dị na-aga menu na pịa ọnwa akara ngosi, ma ị chọrọ iji-acha anụnụ anụnụ na-acha ọcha na agba ma ọ bụ a maara nke ọma Ọchịchịrị na ọnọdụ. Iji tọgharịa ya ọzọ, pịa ọzọ ma ị ga-alaghachi na ọnọdụ gara aga.
Hazie Vidogram nke ọma
Otu n'ime nhọrọ ndị na-adọrọ mmasị bụ -enwe ike n'ụzọ zuru ezu hazie Videogram site na «Video Ntọala» menu, ọ bụ n’ezie ihe na-adọrọ mmasị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhazi ya n’ọ masịrị gị. Nhọrọ ndị ahụ, n'agbanyeghị na Bekee dị, a na-aghọta nke ọma dị ka onye ọ bụla n'ime ha kewara site na edemede.
Na isiokwu nke nzuzo anyị nwere ike itinye koodu mkpọchi, mkpọchi ga-egosi na ihuenyo nkata, nke a na-ezere snoopers. Ọ bụrụ na ịchefu koodu ahụ, nhọrọ iji ya ọzọ bụ ihichapụ ma wụnye ngwa ahụ, ọ bụ ezie na ị ga-atụfu nkata nzuzo niile.
Ntọala ndị ọzọ gụnyere ntọala taabụ, ntọala ngwa ngwa, na deeti na font ntọala. Na ala ị nwere nhọrọ Tọgharia ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịlaghachi na nhazi mbụ nke ngwá ọrụ ji abịa.
Mezue ma hazie menu
Ozugbo anyị banyere menu anyị ga-enwe profaịlụ ọrụ anyị, n'ime ya anyị nwere ọtụtụ nhọrọ, site na ịmepụta otu ọhụụ, ịmepụta nkata nzuzo, ọwa ọhụrụ, ịnweta kọntaktị, ịkpọ oku, ịnweta ozi echekwara na inwe ike ịbanye ntọala profaịlụ anyị n’ahịrị nke mbụ.
Ugbua n'ahịrị nke abụọ Nwere nhọrọ ndị ọzọ dịgasị iche iche, ịnweta IPTV & Egwuregwu (Owa na Egwuregwu), nnweta na usoro iheomume, na-agbasa ozi vidio dị ndụ, nhọrọ Vidogram, ngbanwe kọntaktị, kọntaktị n'ịntanetị, lelee maka mmelite na ọkwa Vidogram na akara nke abụọ.
N'ahịrị nke atọ nke menu enwere nhọrọ abụọ dịkarịa ala dị ka ịkpọ ndị enyi, ọ bara uru ịgbakwunye otu ma ọ bụ karịa n'ime ha site na Telegram na nke ikpeazụ bụ Ajụjụ Ndị A Na-ajụkarị, na ndepụta okwu anyị nwere ike ịmara ihe niile gbasara Telegram na Videogram, otu o si dị iche na ndị ọzọ, wdg ...
Gị na ndị nọ gị nso kparịta ụka
Vidogram nwere ihe mgbakwunye ọhụrụ nke inwe ike ịkpọtụrụ ndị nọ gị nso, ma maka nke ahụ, anyị ga-ebu ụzọ nabata ịbụ ndị a na-ahụ anya site na ndị ruru nso. Ọ dị mma iji zute ndị nọ gị nso ma ọ bụrụ na ịchọghị nsogbu, ị nwere ike ịme onwe gị ka ọ ghara ihichapụ gị ọzọ site na ịpị «Kwụsị igosi m".
Offọdụ kọntaktị gị nwere ike ịpụta anya ma ọ bụrụhaala na ha tinyere Vidogram, kwenye na ha ga-ahụ ya ma chọọ ịgwa ndị nọ ha nso okwu. Ozugbo ị nabatara ya, ị ga-enweta ọkwa na nọmba ekwentị anyị egosighi na ndị ọrụ ọ bụla nke «Ndị nọ nso».
Ọ na-enye ozi gbasara ndị mmadụ, gụnyere aha ahọrọ ahọrọ, ebe dị anya na mita na kilomita. Obere ntakịrị ala ọ ga-ekwe omume ịmepụta otu, lee otu dị na obodo gị na otu ndị ọzọ ndị mmadụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ mepụtara.
Gbasaa ozi gị
Ọ bụrụ na ị ga-ahazi ihe omume, oriri ma ọ bụ ụbọchị ọmụmụ, ọ bụ ezigbo nhọrọ, iji nwee ike iji nhọrọ nke ịmepụta ọwa iji ruo ọha mmadụ. Anyị nwere ike ime ka ọwa ọhaneze ma ọ bụ nkeonwe, ebe ọ ga-enye anyị njikọ nke iji kpọọ ndị kọntaktị gị ọsọ ọsọ na mfe.
Njikọ ị chọrọ ịkekọrịta zuru oke, yabụ ị nwere ike ịhazi ya n'ụzọ na-esote ma jiri opekata mpe nke ise: t.me/aquíiríaelnombre. Ozugbo aha, nkọwa, ahọpụtara dị ka ọha / nkeonwe ma mepụta njikọ ahaziri iche anyị ga-ahọrọ kọntaktị site na listi anyị, dị nnọọ pịa akụ -> iji mepụta otu.
Developer: Onye ozi Vidogram
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » [Video] can nwere ike ugbu a ịkpọ oku vidiyo site na Telegram
Gore, ụjọ na ọbara na Nwụrụ anwụ site n'ehihie, egwuregwu vidiyo ọtụtụ mmadụ abụghị maka mmadụ niile
Google Play na-aga ọrụ ịlụ ọgụ maka ọnọdụ ndabere na ndenye aha na-eduhie eduhie